China CNC rawụta Manufacturer, OEM, ODM - CHENcan CNC
Guzosie Ike Kemgbe 1998
CHENcan® bụ otu n'ime ndị na-eduga nnukwu format CNC ngwọta na enye na China, na-enye a zuru ezu akara nke 5-Axis CNC machining Centers, CNC Mills, CNC routers, na 3D na-ebi akwụkwọ. N'ihi na ihe karịrị afọ 22, anyị raara nye enye otu nke kasị elu Quality-Cost-ruru CNC machining ngwọta maka anyị ahịa. Na gburugburu 200 ọkà ọkachamara, 18,000 ㎡ nke mmepụta eweta, na ISO 9001 gbaara àgwà management usoro, anyị na-enye elu-edu CNC machining ngwọta na oké ọnụ ahịa.
5-Axis CNC machining Center - Isiokwu Movin ...
Large CNC Mill maka nhazi Aluminium nakawa etu esi
Large CNC Mill maka nhazi Osisi nakawa etu esi
Chencan AT1224AD ATC CNC kpara akwụ Dabere rawụta Ce ...
CNC Plasma cutter / Plasma Isiokwu
Marketing ngalaba: akpata na-emepe emepe nwere ahịa. Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na 5 axis CNC center, CNC rawụta, ebu CNC center, RV mejupụtara ogwe usoro center, plasma ọnwụ igwe na eriri laser ọnwụ ígwè ọrụ. Anyị ga-enye ihe kasị mma ngwọta.
N'ime 7day kemgbe gị omenala obodo nwechapụ: ma ọ bụrụ na ndị CNC rawụta si ọ bụla akụkụ nwere nsogbu ọ bụla, anyị ga-agbanwe ya n'ihi na free. Gafere 7 ụbọchị ebe ọ bụ na gị omenala obodo nwechapụ ma n'ime 12 ọnwa akwụkwọ ikike oge: ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọ bụla na CNC
Anyị nwere di iche iche ọkachamara Professional R & D otu, ihe karịrị 20 engineer, nwere ike chepụta na-emepụta 5 axis CNC igwe, RV mejupụtara ogwe nhazi center, nnukwu ebu CNC center na ndị ọzọ na elu-ọgwụgwụ omenala CNC akụrụngwa.
Tụkwasịrị Obi Otu Industry ndú
Professional R & D otu: nwere di iche iche ọkachamara engineer, nwere ike chepụta na-emepụta 5 axis CNC igwe, RV mejupụtara ogwe nhazi center, nnukwu ebu CNC center na ndị ọzọ na elu-ọgwụgwụ omenala ngwá ...